in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 12/10/2011 - No comments
လူကလေးရဲ.ချော့ စရာလဲမရှိထသော မိတ္ထီလာကန်တော်ကြီးလည်း မရှိထသော ဖားကောက် စရာလည်း မရှိထသော မျက်လုံးကြောင်တောင်တောင်လည်း မရှိထသော ဖားကောင်က လည်း မသေးငယ်ထသော ဤ ကဲ့သို့သော ဒေသနာတော်နှင့်အညီ ဤမရှိရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန် မြန်မြန်ကြီး ရရပါလို၏ ဟုဆုတောင်းကြကုန်။ (အရှင် ဇနကာ ဘိဝံသ၏နံနက်ခင်းသြဝါဒများ နှာ-၂၇၂) အရှင်မဟောသဓပဏ္ဍိတ။
"ရပ်" ကိုယ်တော်တိအာဒိံကတွာ
" ထိုင်" ကိုယ်တော်တိ တစတစ
"တို့ ကိုယ်တော်" တိ ပဝုစ္စတိ။
(မန္တလေးမြို့ မိုးကောင်းတိုက် ဒေးဝန်းဆရာတော်ဦးဇောတိကာဘိဝံသ၏ အတ္ထုပတ္တိ.... ဦးပဏ္ဍိစ္စာဘိဝံသ သိန်းသန်းကျောင်းဆရာတော်)
ကိုယ်တော်တိ -နေရာထိုင်ခင်းသည့် ထိုင်ခုံတစ်နေရာ အသေအချာ ရှိနေသော်လည်း ဝါတော်က ငယ်ငယ်စကားတော်ကလဲ မကြွယ် သေးသမို့ ဝင်ထိုင်ရဲဖို့ ဝေလာဝေး မျက်လွှာလေး အသာချ လောင်းသမျှ မတ်တတ်လေးသာခံယူရရှာသော " ရပ်" ကိုယ်တော်ဘဝကို အာဒိံကတွာ -အစပြု ၍ "ထိုင်" ကိုယ်တော်တိတစတစ - တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ တစ်လပြီး တစ်လ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် မျက်လုံး ချင်းအကြိမ်ကြိမ်ဆုံထိုင်ခုံလေးကိုလှမ်းလှမ်းကြည့် ဤသည်ကို ရိပ်မိ သော တကာ တကာမတို့ က ကြွပါအရှင်ဘုရား၊ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ခဏနားတော်မူရင်း ဆွမ်းဟင်းဆွမ်းခံယူ ဖိတ်ကြားသူရှိမှ ထိုင်ရသော"ထိုင်" ကိုယ်တော် ရာထူးကို ရပြီးလျှင် - ပြောကာဟောကာ ပလာပေတွာ -ဘုရားစကားပြော တရားစကားဟော မေးတာလေးတွေ ကိုဖြေ- ဖြေချင်တာလေး တွေမေး ကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့ လား။ အမှန်တစ်ကယ် မလုပ်လို သော်လည်း မလုပ်က အာမစို သမို့ ထိုထိုဤဤစကားများအမှားမရှိရအောင် သတိ ဆောင် ပြောနိုင်သည့်နောက်မှာ မှ-"တို့ ကိုယ်တော်" တိ ပဝုစ္စတိ- ဒါမှ ငါတို့ ဆွမ်းခံကိုယ်တော် ဟူ၍ ပဝုစ္စတိ-အလှမ်းမဝေး တကာတကာမတို့ က ဆွမ်းခံကိုယ်တော်တ ကာတို့ ၏အညွန့် အဖူး တို့ ကိုယ်တော်ဟူသည့် ဂုဏ်ထူးဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ပညတ် သမုတ်တော်မူကြသတတ်။
(အနက်ကားသီဟနာဒ၏ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း အနက် ဖြစ်သည်။)
"ဟဲ့ မောင်ပဉ္ဇင်း - ဈေးချို တစ်ဝိုက်မှာလောင်တဲ့ မီးက နာရီစင်အိမ်(နာရီစင်နားမှာရှိတဲ့ အိမ်) နားရောက်နေပြီလား"
"မောင်ပဉ္ဇင်း ပြင်လျှောက်စမ်း မရောက်ပါဘူးဘုရားဟု လျှောက်စမ်း၊
ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့် အရပ် ကိုယ့် အမေကပ်တဲ့
မပြတ်သာလွမ်းမိပါရဲ့  ......အမေ။
I'll try my best ပါ့လို့ အံခဲပြီး
စင်္ကာပူမှာ တစ်စင်ထူနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ရွာအရပ်
မန္တလေးဆွမ်းခံကိုယ်တော်များတွင် ရပ်ကိုယ်တော် ထိုင်ကိုယ်တော် တို့ကိုယ်တော်ဟုသုံးမျိုး ရှိ၏။ ရာထူးခြင်းကွာခြားသလို ဟင်းများလည်းကွာခြားတတ်၏။ဤသည်ကို ကျေးဇူးရှင် ဒေးဝန်း ဆရာတော်ကြီး ကပြုံးချင်စဖွယ် ဂါထာလေး ရွတ်ဆိုပြခြင်းဖြစ်၏။
ကံကောင်းစွာ ထိုဂါထာလေးကိုပြန်ရွတ်ကြည့်ရာရင်ထဲရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရ၏။ဆရာတော်သည် မည်မျှ သဒ္ဒါကိုအရေးထားကြောင်း "မရောက်သေး" ဟူသည် ရောက်လာရန်ရှိ၏။ မရောက်ဟု ပြင်လျှောက်ရမည် ဟုဆိုသောစကားဖြင့် သိသာပြီ။ ထိုဆရာတော်မျိုးထံတွင် စာတက်ရခြင်းကလုံးဝ မလွယ်ကူချေ။ ဘာမှမဟုတ်။ မန်းကဆရာသမားများကို ကမ်းစာမပါးနိုင်တော့သည့်အတွက် မျက်ခွက်ဘုတ်အုပ်ကပင် တမ်းစာပို့(စ်) လိုက်ရတော့၏။ (သီဟနာဒ)
အမှန်တစ်ကယ်တွင်ဤစာကိုဆုံးမည်ဆိုက ဤ၌ဆုံးလို့ရ၏။ သို့သော်ခပ်တည်တည်နှင့် "သော" သွားတော်မူသည့် ဆရာတော်ကြီးအရှင်ဇနကာဘိဝံသကိုပူဇော်လိုသေး၏။ ထို့ကြောင့်လေးဖြူ၏ နောက်ဆုံးရထား အပိုဒ်လေး တစ်ပိုဒ်ကိုရေးကူးမိ၏။
တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မြင်ကွင်းလည်းမရှိထသော ကြည့်ရင်းနဲ့ဝေးကွာခြင်း လည်းမရှိထသော တစ်ဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်ခြင်းလည်း မရှိထသော (ဒုက္ခဟူသမျှ) အစက်အပြောက်လေး မျှပင် မကျန်ရစ်သော ရေး.....ရေး ဟုအာခေါင်ခြစ်အော်ဟစ်ရန်မလိုတော့သော နိဗ္ဗာန်ကို ဆုတောင်း ပတ္ထနာပြုကြကုန်သတည်း။
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 12/08/2011 - No comments
( “ ကမ်းလက် “ နှင့်ပက်သက်၍ သီဟနာဒ၌ တစ်စုံတစ်ရာ တာဝန်ရှိသည်ဟုထင်၏။ ဤသည်မှာ “ ကမ်းလက် “ ဟူသော အမည်သာဖြစ်၏။ Beach Comber (သဲသောင်ကို ဘီးဖီးသူ) ဟူသော ကလောင်အမည်၊ အနတ္တ ဟူသော ကလောင်အမည်ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေများ ရေးသားတော်မူသည့် သြစတေးလျ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်တစ်ပါးက “ကျွန်ုပ်တို့၌ လက်နှစ်ဖက်ရှိ၏။ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် မြင့်မြတ်သူတို့ ထံမှ ရရှိရန် ရှိသည်များကို ရယူ၍ အခြားလက်တစ် ဖက်ဖြင့် ပြန် လည်ဖြန့်ဝေ ရမည်” ဟုရေးဖူး၏။ ကြိုက်၏။ ထို့ကြောင့် “ကမ်းလက်” ကို အားလုံးသဘောတူ သုံးလိုက်ကြ၏။ သို့သော် (ထို့ကြောင့်) ကမ်းလက်သည် အခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့် ယူလည်းယူပါသည်။ ချီးမြှင့်တော်မူကြပါ မိတ်ဆွေကောင်းတို့။
မဆိုင်သော်လည်း ပြောချင်၏။ ထိုသြစတေးလျသား ရဟန်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းဟုသာ အမည်ခံ၏။ ထေရဝါဒ၊ မဟာယာန စသည့် အမည်နာမများလုံးဝမတပ်၊ လုံးဝမရှိ ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်း၏။ ) ဤကား အမှာ။
ကွန်ပျူတာသည် တန်ခိုးကြီး၏။ ဘီယာသည်လည်းတန်ခိုးကြီး၏။
စကားလုံးများကို ဘာသာပြန်ဆိုရာ၌ အလွန်နှစ်ခြိုက်သော စကားလုံးနှစ်လုံးရှိ၏။ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား တို့ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂသည် ယူနိုက်တက်နေးရှင်းကို ပြန်တွေး ဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းသိ၏။ ထို့ကြောင့်မပြော ချင်။ ပြောချင် သည်ကား စကားလုံးတိကျသေသပ်မှု ဖြစ်၏။ ယူ-နိုက်-တက်-နေး-ရှင်း ငါးလုံးတည်း။ ကု၊ လ၊ သ၊မဂ်၊ ဂ ငါးလုံးပင်တည်း။ အဓိပ္ပါယ်လည်းကွက်တိဖြစ်၏။
ထို့နောက် တယ်လီဗီးရှင်းဖြစ်၏။ ရုပ်မြင်သံကြားဟု ပြန်ဆိုကြ၏။ တိကျ၏။ စကားလုံးကအစ လေးလုံးစီဖြစ်၏။ သို့သော် ထိုတယ်လီ+ ဗီးရှင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ပစ္စည်းများကို ပြန်ဆိုရာ၌ကား သိပ်မစွံတော့ချေ။ ဖြစ်လည်း မဖြစ်နိုင်တော့ချေ။ ဥပမာဆိုရမူ ဗွီဒီယို၊ ဗွီစီဒီ၊ စီဒီ စသည်တို့ဖြစ်၏။ မြင်မြင်သမျှကို မိမိဘာသာဖြင့် လိုက်ခေါ်နေခြင်းသည် အလုပ်မဖြစ်။ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ခေါ်၍ကားရ၏။ ခပ်ကြောင်ကြောင် သာရ၏။ ကြောင်လိုက ရ၏။
မြန်မာစာပေ၌ ပါဠိဘာသာ “စက္က” မှဆင်းသက်လာသည်ဟု ယူဆလိုက ယူဆနိုင်သော “စက်” ဟူသော စကားလုံး တော်တော်များများသုံးစွဲသည်ကိုတွေ့ရ၏။ ပါဠိ “စက္က”က “ဘီး” သို့မဟုတ် “လည်ပတ်ခြင်း” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၏။ မြန်မာ “စက်” ဟူသည်က မက်ရှင်း ဟုခေါ်သည့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကား အဓိပ္ပါယ်ကိုသာ ဆောင်၏။ ထို့ကြောင့် ချိန်းကြိုးလေးတပ်ပြီး ခြေထောက်ဖြင့် နင်းလိုက်လျှင် လူတစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက် (တစ်ခါတစ်ခါ) သုံးယောက်ကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည့် ဘီးနှစ်ဘီးတပ်၊ ဓာတ်ဆီမလိုသော ယာဉ်အငယ်စား လေးကို “စက်ဘီး” ဟုခေါ်၏။ သို့သော် ထိုစက်ဘီးလေး၏ ဒဗလော့မင့် တစ်ခုဖြစ်သည့် ဘေးမှ ဘီးတစ်ဘီး ထပ်တိုးပြီး အခြားလူနှစ်ယောက်ကို ဥပဒေနှင့်အညီ သယ်ဆောင်၍ ရသောယဉ်ငယ်ကို နာမည်မှည့်ခေါ်ရာ၌ မြန်မာစကားမရှိတော့။ သူ့ကို “ဆိုက်ကား” ဟုခေါ်ကြရတော့၏။ “ဆိုက်” သည်လည်းကောင်း၊ “ကား” သည်လည်းကောင်း မြန်မာစကား လုံးမဝမဟုတ်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း မဟုတ်တော့ပဲ မွေးစားရခြင်း (သို့) လက်မြှောက်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သွားတော့သည်။ ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အဓိပ္ပါယ်တူဖြစ်၏။
ထို့နောက် ပါဠိဘာသာ “ဓာတု” မှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ယူဆလိုက ယူဆနိုင်သော “ဓာတ်” ဟူသည့် မြန်မာစကားများလည်း တော်တော်များများ တွေ့ရ၏။ ဓာတ်ခဲ၊ ဓာတ်မီး၊ ဓာတ်စက်၊ ဓာတ်လုံး၊ ဓာတ်ရှင် စသည်တို့ဖြစ်၏။ ထိုဓာတ်များအနက် ဓာတ်ခဲနှင့် ဓာတ်မီးသည် အောင်မြင်၏။ ယနေ့တိုင် သုံးစွဲ နေကြရသေး၏။ မီးအလွန်ပျက်သော နိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့်ဟု ယူဆလိုက ယူဆနိုင်၏။ မယူဆဘဲ နေလိုကလည်းနေနိုင်၏။ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာမရှိ။ သို့သော် ထိုနိုင်ငံ၌ မီးပျက်တတ်သော သဘာဝ လည်းရှိမြဲ၊ ဓာတ်ခဲ၊ ဓာတ်မီးဟုလည်း ခေါ်မြဲတည်း။
“ဓာတ်စက်” ကား ကျဆုံးစပြုလာပြီဖြစ်၏။ အသံချဲ့စက်ဟု တော်တော်များများ သုံးစွဲလာကြ၏။ ဓာတ်ရှင်ကား သုဿာန်တစပြင် ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်၏။ မူဗီဟု ခေါ်သည့် ထိုဓာတ်ရှင်သည် ယနေ့ ရုပ်ရှင် ဖြစ်သွားချေပြီ။ တကယ်မူ ရုပ်သာရှင်သည်မဟုတ် အသံလည်းရှင်သည့်အတွက် ရုပ်သံရှင်ဟု ခေါ်ထိုက်၏။ သို့သော်မခေါ်ကြ။ ( သို့သော်တွေများ၏။ မတတ်နိုင်။ လိုအပ်လျှင်တော့ သုံးရပေမည်။ ) သို့သော် မြန်မာ့ရုပ်သံ ဟူ၍ကား သုံးကြပြန်၏။ သို့သော် ထိုမြန်မာ့ရုပ်သံ အတွက် သရုပ်ဆောင်ကြသော ကိုကျော်သူကိုမူ ရုပ်သံ သရုပ်ဆောင်ဟု မခေါ်ကြပြန်။
ဓာတ်လုံးကား အင်တာနေရှင်နယ်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် မီးဖိုထဲ၌ ဣနြေ္ဒရ၏။ အူကြောင်ကြောင် လူတစ်ချို့ကို ရေစိမ်တိုက်၍ ရ၏။ သင်္ကန်းစ မီးလောင်၏။ တောတောင်ပြုန်းတီး၏။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန် စေ၏။ ဂလိုဘယ်ကို ဝမ်းသထက် ဝမ်းမား ဖြစ်စေ၏။ ယနေ့ ၊ မနေ့က ထိုဂလိုဘယ်ဝမ်းမင်း အကြောင်း တော်တော်ပြောကြ၏။ အဆိုတော် ဒကာမကြီး ဒေါ်ခင်ညွှန့်ရီလည်း အပါအဝင်ဖြစ်၏။ သူမက တော်တော် လေး စော၏။ တေးရေး မောင်ကျော်ညွှန့်ထင်၏။ မြန်မာတို့ မခေကြ။ “ကမ္ဘာမြေက တစစ ပူနွေးလာတယ်” ဟုသူရေး၍ သူမဆို၏။ ဓာတ်လုံးနှင့်တော့မဆိုင်။
ဓာတ်စက်၏ သားသမီးများဖြစ်ကြသည့် အသံကို ရှိရင်းထက် ပို၍ကျယ်လောင်လာအောင် လုပ်၍ ရသောပစ္စည်းကို ခေါ်ရာ၌မူ မြန်မာစကား ဗုန်းဗုန်းလဲကျတော့၏။ ထိုပစ္စည်းကို တစ်ချို့က ဆောင်းဘောက် ဟု ခေါ်၍ တစ်ချို့က စပီကာ ဟုခေါ်၏။ အသံသေတ္တာ ဟု ခပ်ကြောင်ကြောင် မခေါ်ကြ။ ကြောင်လို ကတော့ကြောင်နိုင်၏။ သီဟနာဒပင် မျက်ခွက်ဘွတ်အုပ်ဟု ကြောင်သေး၏။ သို့သော် ထိုမျက်ခွက် ဘွတ်အုပ်က ဟစ်ဖြစ်နေ၏။ လူသည်အကြောင်ကြိုက်၏။
၂၀-ရာစုနှောင်းပိုင်းက ( အစွန်းရောက်မျိုးချစ်စိတ်ဖြင့်) အတိတ်က ခမ်းနားခဲ့သော်လည်း နောက်ကောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် တစ်ရံရောခါက နိုင်ငံကြီး နှစ်ခုကို အတုခိုးကာ သုံးစွဲနေသည့် ပစ္စည်းများ အားလုံးမြန်မာမှုပြုရန်ကြိုးစား ခဲ့ကြဖူးသည်။ ခပ်ကြောင်ကြောင် အလုပ်ဟုထင်သည်။ ကျလည်းကျဆုံးခဲ့သည်။ ခပ်ကြောင်ကြောင် ကျရှုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ-ကားဖြစ်သည်။ ကားကို ဘာသာပြန်လျှင် ကြောင်၏။
ထိုပေါ်လစီသည် ခေတ်ပညာတတ် သွားဆရာဝန်လူရွှင်တော်ဧ။်ပျက်လုံးများအောက်၌ ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကျေတော့၏။
ယခုမှ ပြောလိုသည့်ကိစ္စ ရောက်တော့သည်။
ဗုဒ္ဓ (သို့) သိဒ္ဓတ္ထ ဆိုသည့် အရိုးသားဆုံးလူသားကြီးကို မွေးထုတ်ခဲ့သော်လည်း ထိုဗုဒ္ဓ၏ ရိုးသားသောအဆုံးအမများကို အစာမကြေနိုင်ဖြစ်ကာနှင်ထုတ်ခဲ့သော ထိုတစ်ရံရော အခါက နိုင်ငံကြီးတွင် ဘီယာကို "ဓာတု ပါနီ" ဟုခေါ်ကြောင်းသိရ၏။ သို့သော် ဘီယာဟုပြောသော် လူတိုင်းသိ၏။ မြန်မာလို ဓါတ်ရေဟု ခေါ်နိုင်၏။ သို့သော် ဓါတ်လုံးကိုစိမ်ထားသော ရေကားမဟုတ် ။
မြန်မာတို့မှာလည်းရှိ၏။ ကုန်းဘောင်ခေတ် အမတ်ကြီးတစ်ယောက်ရေးသော အဘိဓါန်၌ င်္ဘီယာကိုမုယောစပါးရည် ဟုဆိုကြောင်းကြားဖူး၏။ တစ်ကြိမ်မက ကြားဖူးသဖြင့် မှန်သည်ဟု ထင်၏။ ထိုအဘိဓါန်စာအုပ်ကား မိမိ၌ မရှိ။ ရှိစရာလည်းမလိုတော့။
သီဟနာဒ၏ တကာ တကာမများ (အချို့) ဘီယာသောက်ကြ၏။ မုယောစပါးရည်ကို မသောက်ကြ။ ဘီယာကြောင့် ဗိုက်ထွက်လာလျှင် ဘီယာဗိုက်ဟုခေါ်ကြ၏။ မုယောစပါးရည်ဗိုက်ဟု မခေါ်ကြ။ အလုပ်တစ်ခု အဆင်တပြေဖြစ်စေရန် ဘီယာဖိုး ကန်တော့ကြ၏။ မုယောစပါးရည်ဖိုး မကန်တော့ကြ။
စတီရီယိုခေတ်ဦး အဆိုတော်တစ်ယောက်က "ဘီယာကျန်သေးလား" ဟုအော်၍မေး၏။ မုယောစပါးရည် ကျန်သေးလားဟုမမေး။ ကဗျာဆရာကြီးတစ်ယောက်က "ငါ့ကိုကျားတံဆိပ်ဘီယာမတိုက်တဲ့ နေ့က" ဟုပြော၏။ ငါ့ကိုကျားတံဆိပ် မုယောစပါးရည် မတိုက်တဲ့ နေ့ကဟု မပြော။ ဘာသာပြန် စကားလုံးရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းနှင့် လူ့နှလုံးသားထဲ ရောက်ခြင်း မရောက်ခြင်းဘာဆိုဘာမျှ မဆိုင်။
ကွန်ပျု (compute) ဟူသည် to calculate or to estimate (a result) ဖြစ်၏။ ယင်းကို (er) ဆက်လိုက်သောအခါ computer ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုကွန်ပျူတာကို မဖြစ်မနေ မြန်မာမှုပြုလိုလျှင် ဂဏန်းပေါင်းစက် ၊ ရလဒ် ခန့်မှန်းစက် ဟုပြန်ရ မည် ဖြစ်၏။ သို့သော် ကြောင်၏။ မပြည့်စုံ။ ကြောင်သမှ တော်တော်ကို သွက်သွက်ခါကြောင်၏။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာဟု ပဲ ခေါ်ပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အနှီသတ္တ၀ါလေးသည် "စိတ်" ဆိုသည့် "စိတ္တ" ကိုမြန်မာ မှုပြုမရ သကဲ့ သို့ ဖြစ်သောကြောင့်ပင်တည်း။
သီဟနာဒသည် ရဟန်းဖြစ်၏။ ဘီယာမကြိုက်။ လူဖြစ်ပြီး ဘီယာကြိုက်သော် ဘီယာကိုသာ သောက်မည်။ မုယောစပါးရည်ကို မသောက်။ ကွန်ပျူတာကိုသာ သုံးမည်။ ရလဒ် ခန့်မှန်းစက်ကို မသုံး။
နောက်ဆုံး.... ဘီယာကို မြန်မာလို မည်သို့ခေါ်ပါသနည်း။ သင်ကိုယ်တိုင် (တကာ (သို့) တကာမ ကိုယ်တိုင် ) တိုးတိုးလေးမေး၍ တိုးတိုးလေး ဖြေကြည့်စေချင်သည်။ ပျော်စရာကောင်းပါသည်။
သစ္စာစကား ဆိုရသော် သီဟနာဒသည် ကွန့်မင့်မရေး၊ ကွန့်မင့်မပြန်ပါ။ သို့သော် သူတို့ဆီမှာရှိသည့် ဗဟုသုတကို ရိုးသားစွာ ကမ်းလာသည့် လက်နှစ်ချောင်းကြောင့် ကွန့်မင့်မဟုတ် ဆောင်းပါးရေးလိုက်၏။ ကမ်းလက်သည် ကမ်းလည်း "ကမ်း" ပါ၏။ ယူလည်း ယူပါ၏။
Myomyat Thu ဟု မျက်ခွက် ဘွတ်အုပ်တွင်တွေ့ရသူက "ကွန်ပျူတာကို တရုတ်လို တျန့်နောင် " ( လျှပ်စစ်ဦးနှေက် ) ဟုခေါ်ပါသည် ။ တခြားဘာသာစကားတော့ မသိပါ။" ဟု ကမ်း၏။ ရိုးသား၏။ ထို့ကြောင့် ချစ်မိ၊ ယူမိ၊ လေးစားမိ၏။
Vimuttisukha Bliss ဟု မျက်ခွက်ဘွတ်အုပ်ပေါ်တွင် ပေါ်လာသည့် နောက်တစ်ဦးကတော့ "ဂျပန်လို ပါဆိုကွန် (personal computer ကို အတိုချုံး ထားခြင်း) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် computer ဆိုတဲ့ အသုံးကိုတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံး လက်ခံသုံးနှုန်းကြတာ အမှန်ပါဘဲ။" ဟုကမ်းလာပါသည်။ သီဟနာဒကလည်း ကျေးဇူးတင်စွာ ယူလိုက်ပါသည်။ ဤသို့ ဝင်း-ဝင်း စီကျူယေးရှင်း ဖြစ်စေချင်၏။ သို့သော် အချို့ကား သူတို့သိတာကို မကမ်းပါဘဲ ငေါက်ငမ်းထွက်သွားကြ၏။ ထို့ကြောင့် မည်သူမှ မရလိုက်ကြ။
တရုတ်လိုလျှပ်စစ်ဦးနှောက်ကို မြန်မာလို ဓါတ်ဦးနှောက်ဟုခေါ်နိုင်၏။ ပါဆိုကွန်ကား ဂျပန်စကား အစစ် မဟုတ်။ မွေးစား စကားတည်း။ ထိုင်းများလည်း အသံကွဲစွာ ကွန်ပျူတား - ဟုထွက်သံကြားရဖူး၏။
မျိုးမြတ်သူကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် နောင်ကိုဓါတ်ဦးနှောက်ဟု သုံးမိကောင်းသုံးမိပါမည်။ သေချာသည်ကတော့ "မုယောစပါးရည်၊ ဓါတုပါနီနှင့် ဘီယာသောက်သူများ" ဆောင်းပါးဖြင့် ၀ိမုတ္တိသုခ ဘလစ် (ဘလစ်(စ်) ဟူသည်ဘာသံနှင့်တူမှန်း မသိသော်လည်း) ၏ "computer ဆိုတဲ့ အသုံးကိုတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံး လက်ခံသုံးနှုန်းကြတာ အမှန်ပါဘဲ" ဆိုသည့်စကားလေးကို ခံစားချက်နှင့်ကိုက်သဖြင့် သိုသိုသိပ်သိပ် ကျေးဇူးတင်ရင်း ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးလေးသည် သရော်သံစွက်သဖြင့် ယောနိသော မနသိကာရ မရှိသူအချို့ကို ကြိုတင်တောင်းပန်ချင်၏။
ဤသစ္စာစကားကြောင့် အသက်တိုလိုက တိုစေ။ သူတော်ကောင်းများနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် ရရပါလို၏။
ဘုရားရှင်သမာပတ်မှ ထခဲ့ရတဲ့ “ပဉ္စသီင်္ခဆိုတီးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်” (အပိုင်း - ၂)
in ကဗျာရှည်, ဆုထားမျက်ချယ် - on 12/05/2011 - No comments
ရ။ ၀ါရုမု သဇ မံ ဘဒ္ဒေ၊ သဇ မံ မန္ဓ လောစနေ
ပလိဿဇ မံ ကလျာဏီ၊ ဧတံ မေ အဘိပတ္ထိတံ။
ပြီး- မင်းလက်အစုံနဲ့ ထွေးပိုက်လှည့်
ဘ၀မှာ လိုတာ ဆိုလို့ ဒါအကုန်ပါပဲကွယ်။
၈။ အပ္ပကောဓ ၀တ မေ သေ န္တာ၊ ကာမော ၀ိလ္လိတကေ သိယာ
အနေက ဘာဝေါ သမုပ္ပါဒိ၊ အရဟန္တေ၀ ဒက္ခိဏာ။
My desire was slight at first, Oh maid,
ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကို ပေးလှူရတဲ့ အကျိုးတွေလိုပဲ။
၉။ အယံမေ အတ္တိ ကတံ ပုညံ၊ အရဟန္တေသု တာဒိသု
တံ မေ သမ္ဗင်္ဂ ကလျာဏီ၊ တယာ သဒ္ဓိံ ၀ိပစ္စိတံ။
To those Noble Ones, may mind reward
When it ripens, be your love, most fair.
၁၀။ သကျပုတ္တောဝ ဈာနေသု၊ ဧကောဒိ နိပကော သတော။
အမတံ မုနိ ဇိဂိဿာနော၊ တ မဟံ သူရိယ ၀စ္ဆသေ။
As the Sakyan’s Son in Jhana rapt
(သာကိယအရှင်) ဈာန်ရင်ခွင်မှာ (သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား)
မသေရာ မွတ်သိပ်စွာ စူးစိုက်ရှာနေသလို
မင်းအချစ်ကို ငတ်မွတ်စွာ ငါရှာနေသကွဲ့။
၁၁။ ယထာပိ မုနိ နန္ဒေယျ၊ ပတွာ သမ္ဗောဓိ မုတ္တမံ။
ဧ၀ံ နန္ဒေယျ ကလျာဏီ၊ မိဿီ ဘာဝံ ဂတော တယာ။
ငါလည်းလေ မိုးမမြင် နေမှာ
၁၂။ သက္ကောစမေ ၀ရံ ဒဇ္ဇာ၊ တာဝတိံသာန မိဿရော။
တာဟံ ဘဒ္ဒေ ၀ရေယျာယေ၊ ဧ၀ံ ကာမော ဒဠှော မမ။
It’s you I’d crave, my love for you is so strong.
တို့အချစ်က အဲသလောက် မြဲမြံတယ်။
၁၃။ သာလံဝ နစိရံ ပုပ္ဖံ၊ ပိတရံ သေ သုမေဓသေ။
၀န္ဒမာနော နမဿာမိ၊ ယဿာ သေတာ ဓိ သိ ပဇာ။
Likeasala-tree fairly blossoming,
For his offspring’s sake, so sweet and fair.
မွှေးလှတဲ့ ပန်းတွေကြောင့် မြတ်နိုးရသလို
ဘုရားရှင်သမာပတ်မှ ထခဲ့ရတဲ့ “ပဉ္စသီင်္ခဆိုတီးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်” (အပိုင်း - ၁)
Labels: ကဗျာရှည်, ဆုထားမျက်ချယ်
❋ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အသံမစဲ မဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲကြီး ဖိတ်ကြားလွှာ❋
in ဘာသာရေးသတင်း - on 12/05/2011 - 1 comment
လေးစားရပါသော တရားချစ်ခင် ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်အပေါင်းတို့…
မင်္ဂလ၀ိဟာရကျောင်းဆရာတော်များ၏ ဦးဆောင်ကမကထပြုမှုဖြင့် အဘိဓမ္မာအသင်းကြီး (စင်ကာပူ) မှကြီးမှူး ကျင်းပအပ်ပါသော ဒုတိယအကြိမ်မြောက်လူပုဂ္ဂိုလ်များ အသံမစဲ မဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပွဲကြီးတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတကွပါဝင်ဆင်နွှဲ ကုသိုလ်တော်ယူနိုင်ကြပါရန် ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် ။
အထူးသဖြင့်စာမျက်နှာ(၂၆၄၀)ရှိသောပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကို(၅)ရက်တိုင်တိုင်အသံမစဲလူပုဂ္ဂိုလ်များတစ်ဦးချင်း အလှည့်ကျပူဇော်မည်ဖြစ်ပါ၍ သဒ္ဓါကြည်လင်ပါရမီရှင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအား ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပြီး ကုသိုလ်တော်ယူကြစေလိုပါသည်။ ယင်းသို့ကုသိုလ်တော်ယူနိုင်ရန်အတွက်လည်းပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ် ပူဇော်နည်းကို မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်းတွင် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များမှ အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ ၂း၀၀ မှ ၄း၀၀ နာရီ အထိ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ပါဝင်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လိုသူများနှင့် ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်တော်ပါဝင်လိုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အချိန်ဇယားများတွင်ကြည့်ရှု၍ ကော်မတီဝင်များသို့ ဆက်သွယ်စားရင်းပေး နိုင်ပါ ကြောင်း နိဗ္ဓာန်အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော် လေးမြတ်စွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။။
၁။ ဒုတိယအကြိမ် မဟာပဋ္ဌာန်း ပူဇော်ပွဲ အချိန်ဇယား
၂။ ဒုတိယအကြိမ် မဟာပဋ္ဌာန်းပူဇော်ပွဲ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်တော်
နေ့ရက်။ ။ ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ(၂၂)ရက် မှ (၂၆)ရက် နေ့အထိ။
ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၃-ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၁၄)ရက်မှတပို့တွဲလဆန်း(၃)ရက်နေ့အထိ။
အချိန်။ ။“ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် (၉) နာရီတွင် စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။”
နေရာ။ ။မင်္ဂလ၀ိဟာရကျောင်းတိုက်၊ ယူးနို့စ်ဘူတာအနီး ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ။
Mangala Vihara Buddhist Temple, 30 Jalan Eunos, S419495.
နတ်လမ်းညွှန် ☞ Eunos MRT, Exit C, Map
၁။ ဦးမြင့်သိန်း ☎ ၈၁၅၉ ၃၉၈၉ ၊ ✉mtheingeo@gmail.com
၂။ ဦးစည်သူအေးကို ☎ ၉၁၀၈ ၃၆၇၈ ၊ ✉sithuayeko07@googlemail.com
၃။ ဦးဇော်မျိုးမင်း ☎ ၈၂၆၁ ၉၅၈၁ ၊ ✉zawmyomin09@gmail.com
၄။ ဦးအောင်ထွန်း ☎ ၈၅၁၀ ၇၂၂၃ ၊ ✉maharpahtan@gmail.com
၅။ ဦးမြင့်ထွန်း ☎ ၉၃၉၀ ၁၆၉၄ ၊ ✉soewaithu@gmail.com
၆။ ဒေါ်ခင်စန်းယု ☎ ၈၂၉၈ ၆၂၉၇ ၊ ✉khinsanyu07@googlemail.com
၇။ ဒေါ်ရွှေဇင်ထွန်း ☎ ၉၇၅၇ ၅၈၉၀ ၊ ✉shwezintun@gmail.com
၈။ ဒေါ်ဆုရည်မွန် ☎ ၉၀၆၆ ၂၄၀၇ ၊ ✉sarsanamyoset@gmail.com
in ဘာသာရေးသတင်း - on 12/05/2011 - No comments
မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်း ဆရာတော်များနှင့် အဘိဓမ္မာအသင်း နာယကဆရာတော်များ၏ သြဝါဒကိုခံယူ၍ အဘိဓမ္မာအသင်းကြီး(စင်္ကာပူ)မှ ကြီးမှူးကျင်းပအပ်သော စင်္ကာပူနိုင်ငံ ပထမဆုံးအကြိမ် ပရဟိတ အသင်းပေါင်းစုံ စုပေါင်းဒုလ္လဘ ရဟန်းခံပွဲကို တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက် ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁-ရက်ညနေမှ ၂၆-ရက်နေ့ထိ၊ မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်းတွင် အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အား လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
မင်္ဂလာနေရာ။ ။ မင်္ဂလ၀ိဟာရကျောင်း ၊ 30 Jalan Eunos, Singapore 419495
မင်္ဂလာနေ့ရက်။ ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁-ရက် မှ ၂၆-ရက်ထိ
မင်္ဂလာအချိန်။ ။ ၂၁-ရက်နေ့နံနက် (၁၀) နာရီတွင် ပဗ္ဗဇ္ဇမင်္ဂလာ( ရှင်ပြုမင်္ဂလာ )
ညနေ (၃) နာရီတွင် ဥပသမ္ပဒမင်္ဂလာ ( ရဟန်းခံမင်္ဂလာ )
ညနေ (၆) နာရီတွင် စုပေါင်းသိမ်ဆင်းလောင်းကုသိုလ်ပွဲ
ဒုလ္လဘရဟန်းခံခြင်း အတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁-ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးပို့ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ပစ္စည်းလေးဖြာ ကုသိုလ်ပြုလိုသူများ အောက်ပါ အတိုင်းဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
၁။ ရှင်ရဟန်းတစ်ပါးအတွက် ပရိက္ခရာတစ်စုံ S$50
၂။ အာရုံဆွမ်းတစ်နပ်စာ S$80
၃။ နေ့ဆွမ်းတစ်နပ်စာ S$120
မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့် အာရုံဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်း ကပ်လှူလိုပါလျှင် သက်သတ်လွတ်ဆွမ်းဟင်းများ စီစဉ်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ဝေယျာဝစ္စ ကုသိုလ်ယူလိုသူများလည်း စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စာရင်းပေးထားသော ဒုလ္လဘရဟန်း အပါး ၂၀-ပြည့်ပြီးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်းလေးမြတ်စွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
၁။ ဦးမြင့်သိန်း ၈၁၅၉ ၃၉၈၉ ၊ e-mail : mtheingeo@gmail.com
၂။ ဦးစည်သူအေးကို ၉၀၁၈ ၃၆၇၈ ၊ e-mail :sithuayeko07@gmail.com
၃။ ကိုဇော်မျိုးမင်း ၈၂၆၁ ၉၅၈၁ ၊ e-mail : zawmyomin09@gmail.com
၄။ မခင်ရဲလွင် ၉၇၄၃ ၆၉၉၂ ၊ e-mail : khinyelwin@gmail.com
၅။ မဆုရည်ဖြိုး ၉၄၂၃ ၄၉၁၉ ၊ e-mail : soft.tune07@gmail.com
လူတိုင်းအတွက် အဘိဓမ္မာ အသင်းကြီး